Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) - Hello Sayarwon
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား))
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား))
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Levonogestral သည် Progestin ဟော်မုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကလေးမရစေရန် တားပေးသောဆေးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် သုတ်ကောင်များနှင့် မျိုးဥများကို မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သားအိမ်တွင် သန္ဓေတည်ခြင်းကို တားပေးသောဆေးဖြစ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် Levonogestral ကို အကာကွယ်မဲ့သော လိင်ဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ပြီးချိန်နှင့် မိမိသုံးနေသော ကိုယ်ဝန်တားဆေးများထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်း ယူဆရသော အချိန်များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုပါသည်။
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Levonogestral သည် မိန်းမကိုယ်မှတဆင့် သားအိမ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းရသော ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ထည့်ခြင်းကို တတ်ကျွမ်းပညာရှင် သို့မဟုတ်ဆရာဝန်က လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး အကာကွယ်မဲ့သော လိင်ဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ပြီးချိန်နှင့် မိမိသုံးနေသော ကိုယ်ဝန်တားဆေးများထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်း ယူဆရသော အချိန်များတွင် ချက်ချင်းထည့်သွင်းရခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ Levonogestral သောက်ဆေးကို သောက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း အန်ထုတ်မိပါက ထပ်သောက်ရန် လိုမလို ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Levonogestral ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Levonogestral ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Levonogestral ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Levonogestral ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Levonogestral ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် X ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တုပ်ကွေး လက္ခဏာများ ခံစားရခြင်း
ဆေးသုံးနေစဉ် ၆ ပတ်အတွင်း ရာသီမလာခြင်း
ခြေထောက်များ ဖောရောင်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ နာခြင်း
စကားပြောခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရာတွင် ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်ခြင်း
မိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်းခြင်း၊ အဖြူများဆင်းခြင်း
သို့သော် အချို့သော ဆိုးကျိုးများသည် မပြင်းထန်သောကြောင့် သင့်ကို ဆိုးရွားစွာသက်ရောက်မှုများရှိမှသာလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ
မိန်းမကိုယ်ထဲ ဆေးထဲ့လိုက်သောအခါ အနည်းငယ်နာကျင်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း
ဆေးထည့်ပြီး ၃ လ မှ ၆ လအတွင်း ရာသီမမှန်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Levonogestral ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Levonogestralနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။
carbamazepine, ethotoin, felbamate, oxcarbazepine, phenytoin, topiramate စသည့် အတက်ပျောက်ဆေးများ
atazanavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, tipranavir, ritonavir စသည့် HIV ဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Levonogestral က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Levonogestral ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
သားအိမ်ချွဲမြေးစစ်ဆေးခြင်းတွင် ရောဂါ တစုံတရာ တွေ့ခြင်း
ရင်သား၊ သားအိမ်နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာများ
လိင်အင်္ဂါနှင့် တင်ပါးဆုံပိုင်းတွင် ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်ဖူးခြင်း
နေရာမှား သန္ဓေတည်ခြင်း၊ သားဥပြွန်သန္ဓေတည်ခြင်းများ ဖြစ်ဖူးခြင်း
ကိုယ်ခံအားနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများရှိခြင်း
သားအိမ်ထဲတွင် ထီးကဲ့သို့ သန္ဓေတားပစ္စည်း ထဲ့ထားခြင်း
အကြောင်းရင်းတစုံတရာမရှိဘဲ မိန်းမကိုယ်မှ သွေးထွက်ခြင်း တို့ရှိလျှင် သင့်အတွက် စိတ်ချရမှုရှိစေရန် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Levonogestral ကို ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း ထည့်သင့်ပြီး ဒုတိယဆေးပြားကို ပထမဆေးပြားထည့်ပြီး ၁၂ နာရီအတွင်း ထည့်သင့်ပါသည်။
Levonogestral ကို ရာသီစက်ဝန်းပတ်လည် မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သို့သော် သင့်ဆရာဝန်က မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုရန် ညွှန်ကြားပါက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။
ကလေးတွေအတွက် Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်များအတွက် Levonogestral နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျစိတ်ချရသောဆေးပမာဏများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသာ Levonogestralကို အသုံးပြု သင့်ပါသည်။
Levonorgestrel (Intravaginal) (လီဗိုနိုဂတ်စ်ထရေးလ် (မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်သော ဆေးအမျိုးအစား)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Levonogestral ကို 20 microgram အားနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Levonogestral ကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Levonorgestrel. https://www.drugs.com/cdi/levonorgestrel.htmlAccessed December 12, 2016.
Levonorgestrel. https://www.drugs.com/ppa/levonorgestrel.html. Accessed December 12, 2016.
Levonorgestrel. https://www.drugs.com/mtm/levonorgestrel.html. Accessed December 12, 2016.